गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरीका, अस्ट्रेलीया र अफ्रिका सम्म को के छ ? मतगणना
प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०९:००
काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अमेरीका, अस्ट्रेलीया र अफ्रिकाको मतगणना सक्किएको छ । निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार तिनै क्षेत्रको मतगणना सक्किदा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले अग्रता लिएका छन् । आचार्यले अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्तलाई १८ मतले पछि पारेका छन् ।
महिला उपाध्यक्षमा रबिना थापा ११७ तथा सपिला राज भण्डारीको ८७ मत परेको छ ।
त्यस्तैगरी महासचिवमा जानकी गुरुङ १०२ डा. हेमराज शमार्को ६१ मत रहेको छ भने सचिवमा अभिमानसिंह बस्नेत १२२, बिनय अधिकारी ७, दिपक ओली १४, गौरीराज जोशी ९०, आरके शर्मा ४२, शिव कुमार बस्यान ३९, कुश लिम्बु २० रहेको छ ।